နှုတ် ဆက် ခဲ့ ပါ တယ် – Hlataw.com
ကျွန်တော် ခွန်နှစ်တန်း တက်နေချိန်မှာ သူက အသက် ဆယ့် ရှစ်နှစ်ရှိပြီ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ဆီကပညာတွေ အတော်များများရခဲ့ပါတယ်။ သူ့နာမည်က ၀ါဝါတဲ့။ ဆယ်တန်းတက်နေတယ်။ တနေ့တော့ အခွေသွားကြည့်ရင်းနဲ့ မိုးသည်းသည်းထန်ထန်ရွာလာရော …။ အဲဒါနဲ့ သူ့အဒေါ်က ကျွန်တော့်ကို ““သား မပြန်နဲ့တော့လေ ဒီမှာပဲအိပ်”” ဆိုပြီးတော့ သူ့တူမကို ““ခေါ်အိပ်လိုက်ပါ၊ ကလေးတယောက်ထဲ မိုးရွာနေတော့ ကြောက်နေလိမ့်မယ်”” ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်။ ညလည်း နည်းနည်း နက်လာတော့ ကျွန်တော်သမ်းပြလိုက်တယ်။ မ၀ါဝါက ““မောင်လေး အိပ်ချင်နေပြီလား”” ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ရင်း အပျင်းတချက်ဆန့်လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာပဲ မ၀ါဝါက (နောက်ကို မ၀ါဝါကို မမလို့ပဲရေးတော့မယ်) သူ့အခန်းထဲခေါ်သွားတော့တယ်။ သူ့တယောက်ထဲ နေတဲ့အခန်းဆိုတော့ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း၊ မှန်တင်ခုံတွေ စာကြည့်စားပွဲတွေနဲ့ပေါ့လေ။
ကျွန်တော့်ကို အိပ်ယာပေါ်ခေါ်သွားပြီး ခြင်ထောင်ချပေးတယ်။ သူကတော့ အပြင်ဘက်မှာ စာကျက်နေသေးတာပေါ့။ ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပဲ၊ မီးလင်းနေရင် မအိပ်တတ်တော့ မီးပိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ညအိပ်မီးလေးပဲ ကျန်တော့ မမလည်း စာကျက်လို့မရတော့ပဲ အိပ်ရာထဲ ၀င်လာ ရတာပေါ့။ မမက ကျွန်တော့်ဘေးမှာ လှဲချလိုက်တယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော့်ကို ချမ်းနေလားလို့မေးပြီး စောင်ခြုံပေးတယ်။ ခဏနေတော့ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေ မှေးစင်းလာတော့တယ်။ ကျွန်တော် အိပ်တ၀က်နိုးတ၀က်ဖြစ်နေတုန်းမှာ ကျွန်တော့် နဖူးကို ပွတ်ပေးနေတာကိုခံစားမိလိုက်တယ်။ ဆက်ပြီး ဆံပင်တွေ၊ ပါးတွေကိုလည်း ပွတ်ပေးနေတော့ ကျွန်တော်ပြန်ပြီး နိုးလာတော့တယ်။ ဘေးကိုလည်းလှည့်ကြည့်လိုက်ရော …မမ၊ ““မမ မအိပ်သေးဘူးလား”” မမက ဘေးတစောင်းလက်ထောက်ထားရင်း ကျွန်တော့်ကိုကြည့်နေတယ်။
မမရဲ့မျက်နှာလေးက မှိန်ဖျော့ဖျော့မီးရောင်မှာ ချစ်စရာကောင်းလောက်အောင် လှပနေတယ်။ တကယ်တော့ မမကိုကျွန်တော် ကြိတ်ပြီးကြိုက်နေတာကြာပြီ။ ကိုယ်ကလည်း ကလေး ဆိုတော့ ပြောမကောင်းဘူးလေ။ ခဏနေတော့ သူ့လက်တွေက ကျွန်တော့်ပေါင်ပေါ်ကိုရောက်လာတယ်။ ပွတ်သပ်နေရင်းက ခဏကြာတော့ သူက ““မောင်လေး မမကို နည်းနည်းလောက်နှိပ်ပေးပါလား”” ကျွန်တော်ထထိုင်လိုက်တော့ မမကမှောက်ပေးတယ်။ ကျောပေါ်ကို လို့ပြောတော့၊ ကျွန်တော်လည်း သေသေချာချာနှိပ်ပေးလိုက်တာပေါ့။ မမက ““မောင်လေး၊ နည်းနည်း အားလျှော့ပါဦး၊ ပွတ်ပေးသလောက်ပဲ နှိပ်လေ”” သူ့အလိုကျနှိပ်ပေးလိုက်တော့ မမက ““ပေါင်ကို နည်းနည်းနှိပ်ပေးလေ”” ဆိုတော့ ထပ်ပြီးနှိပ်ပေးရပြန်တယ်။ နှိပ်ပေးရင်း ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ အမျိုးအမည်မသိ ဝေဒနာတရပ်က ထကြွ နိုးလာတာပေါ့ ။ နည်းနည်းလဲကြာရော၊ ပက်လက်လှန်လိုက်ပြီး လက်မောင်းတွေကိုနှိပ်ခိုင်းပြန်တယ်။
လက်မောင်းတွေကိုနှိပ်ရင်းနဲ့ မမရဲ့နို့တွေကို ကျွန်တော့်လက်ခုံကလေးနဲ့ အသာတို့ကြည့်လိုက်တယ်။ မမကိုကြည့်လိုက်တော့ မသိသလိုပဲ။ နောက်တော့ ““ဗိုက်ကြောတွေက နည်းနည်းတင်းနေသလိုပဲ”” လို့ပြောပြီး ကျွန်တော့်လက်တွေကိုဆွဲပြီး သူ့ဗိုက်ပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ တမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ သူ့နို့တွေကို ကိုင်တာများ သိသွားလို့လားမသိဘူး လို့လည်းတွေးမိသေးတယ်။ ခပ်တည်တည်နဲ့ ဗိုက်ကိုနှိပ်ပေးနေရင်းနဲ့ ကြာလာတော့ … ““ မောင်လေး ”” ဟင် ဘာလဲ မမ ““ မောင်လေးကို မမကြည့်နေတာကြာပြီ၊ မမနို့တွေကို ကိုင်ချင်နေတာမဟုတ်လား ”” ဟာ မမကလဲ … ““ မရှက်ပါနဲ့ မောင်လေးရယ်၊ မမက မောင်လေးကိုင်ချင်ရင် ကိုင်လို့ ပြောမလို့ပါ ” တကယ် … တကယ်ပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှပြန်မပြောရဘူးနော် ““ ဟုတ်ကဲ့ ”” စစချင်းတော့ ကျွန်တော်လဲ ကိုင်ဖို့ကို လက်ကမရဲဖြစ်နေတယ်။
မမက တချက် ခစ်ကနဲရယ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့် လက်တွေကိုဆွဲယူပြီး သူ့နို့တွေပေါ်တင်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့မှပဲ အနှစ်နှစ်အလလက ကိုင်ချင်နေတဲ့ မမရဲ့နို့တွေကို အနီးကပ်ကြည့်ရင်း ကိုင်ရတော့တယ်။ ပထမတော့ အင်္ကျီပေါ်ကပဲ ပွတ်လိုက်၊ ညှစ်လိုက်နဲ့လုပ်နေရတယ်။ ခဏနေတော့ ““မမ၊ ကြယ်သီးတွေဖြုတ်လိုက်မယ်နော်”” လို့ပြောလိုက်တော့ ခေါင်းကိုအသာညိတ်ပြတယ်။ ကျွန်တော်လဲ အောက်ဆုံးကြယ်သီး ကနေစပြီးဖြုတ်လိုက်တယ်။ အိပ်ရာဝင်တာမို့ အတွင်းခံဝတ်မထားတဲ့ သူ့ရဲ့ မို့မို့ဖောင်းဖောင်းနို့ကြီးတွေက မီးရောင်မှိန်မှိန် အောက်မှာ ၀င်းဝါစိုပြေလွန်းလှတယ်။ လက်နဲ့ထိကြည့်လိုက်တော့ အောက်ကကျွန်တော့်ပစ္စည်းက ဆတ်ကနဲထတောင်တယ်။ နို့အုံတခုလုံးကို သေသေချာချာ နှံ့နှံ့စပ်စပ် တို့ထိကြည့်ရင်းနဲ့ မမမျက်နှာကိုမော့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျေနပ်နေသလိုပဲ။ မျက်လုံးလေးတွေက တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ …။
ခဏစဉ်းစားရင်း နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လျှာနဲ့လျက်ပေးလိုက်တော့ … ““ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေးရယ်၊ လိမ္မာလိုက်တာ”” ကျွန်တော်လည်း မမကြိုက်မှန်းသိလို့တက်ကြလာပြီး မမပေါ်တကိုယ်လုံး ပြစ်လှဲချလိုက်တယ်။ မမက ကျနော့်ကိုအလိုက်သင့် ဆွဲဖက်ထားလိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်လုံး တဟင်းဟင်းနဲ့ဖြစ်လာပြီး ကျွန်တော်လဲ မမနို့ကြီးတွေကို အားရပါးရလျက်ပေးရင်း တခါမှာတော့ နို့သီးခေါင်းကလေးကို စုပ်ယူလိုက်တော့တယ်။ ““ သိပ်ချစ်တာပဲ မောင်လေးရယ် ”” အတူတူပဲပေါ့ မမရဲ့ … ““ မောင်လေးက သိပ်လိမ္မာတာပဲ၊ မမအကြိုက်ကိုလဲ သိတယ် ”” …““ ကဲ လာ၊ မောင်လေးက ခေါင်းရင်းမှာအိပ်လိုက်၊ မမပြမယ် ”” အဲဒီလိုပြောတော့ ကျွန်တော်လဲ ခေါင်းရင်းဘက်တိုးလိုက်ပြီး ထိုင်နေလိုက်တယ်။ မမက ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ ထောင်ထနေတဲ့ ကျွန်တော့်ဟာလေးကို မမတွေ့သွားတယ်။
““မောင်လေးက လူဆိုးပဲ”” အဲဒီလိုပြောပြီး ကျွန်တော့်ဟာကို လက်နဲ့ ကိုင် လိုက်တော့ ကျွန်တော့် တကိုယ်လုံး ဓာတ်လိုက် သလို တွန့် သွားတယ်။ ထိပ်က အရေပြား လေး ကို ဆွဲလှန် လိုက်တော့ ဒစ် ကောင်းကောင်း မပြုတ် သေးတဲ့ ထိပ်ဖူး လေးက ထွက်လာတယ်။ သူ တချက် ပြုံးလိုက် ပြီး ဆတ်ကနဲ ထိပ်ကလေး ကို ဖမ်းငုံ လိုက်တော့ … ““အား”” ဆိုပြီး ကျွန်တော် လန့်အော် လိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်လေ၊ စိတ်ထဲ ထင်တာ က ကိုက် လိုက်ပြီ ထင်တာကိုး။ မမက တချက် မော့ကြည့်ရင်း ““ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်၊ နာလို့လား ”” ““မ မ မဟုတ်ပါဘူး မမ၊ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ လန့်သွားလို့ပါ”” လို့ပြောလိုက်ရင်း မမှီမကမ်းနဲ့ မမရဲ့နို့တဖက်ကို လှမ်းကိုင် လိုက်တယ်။ မမက အလိုက် တသိနဲ့ ကျွန်တော် ကိုင်သာ အောင် ရှေ့တိုး ပေးတယ်။ ခဏ ကြာတော့ ကျွန်တော့်ဟာထဲ မှာ ဖျင်းဖျင်း ဖျင်းဖျင်းနဲ့ ယားလာပြီး ထိပ်ကနေ အရည်တွေ ကို ပန်းထုတ် လိုက်တော့တယ်။
မမလဲ ပန်းပြီး သွားအောင် စောင့်ပြီးမှ ကျွန်တော့် ကို တချက်ကြည့် ပြီး မျိုချလိုက်တယ်။ ကျွန်တော် သိပ်အားနာ သွားပြီး … မမ မမ ဟင် ဘာလဲ မောင်လေးရဲ့ … ဘာလို့မျိုချလိုက်တာလဲ မမရယ်၊ ရွံစရာကြီးကို … မောင်လေးကို ချစ်လို့ပေါ့ ““ သြော် မမရယ် …”” …ဒါဆိုရင် မောင်လေးရော မမကို လုပ်ပေးပါလား … ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ မမရဲ့ … ““ မမပြမယ်လေ ”” မမကသာ ဆက်တိုက်ပြောပြပါတော့သည်။ ““ နေဦး မမ ထမီချွတ်လိုက်ဦးမယ် ”” ရပြီ၊ မောင်လေး လက်ပေး …..ဒီမှာ ဖောင်းဖောင်းလေး အစိလေးကို တွေ့လား….အဲဒါက အဓိကနေရာပဲ မောင်လေးရဲ့၊ မှတ်ထားနော် အဲဒီနေရာကို များများပွတ်ပေးရမယ် …. နောက် လက်ညှိုးလေးနဲ့ ဒီအပေါက်လေးထဲကို ထိုးထည့်….အင်း သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်ပေး …. ဟုတ်ပြီ၊ အစိလေးကိုလည်းပွတ်ပေးလေ… ကျွန်တော်လည်း မမပြောတဲ့အတိုင်း စွမ်းဆောင်ပေးလိုက်တော့ မမလည်း တဟင်းဟင်းနဲ့ အသံတွေပြုလာတယ်။
အသံတွေနဲ့အတူ အရည်တွေလည်း တဖြည်းဖြည်း ထွက်ကျလာတယ်။ ကျွန်တော့် လက်တဖက်က အစိလေးကိုပွတ်ပေးပြီး နောက်တဖက်က အကွဲကြောင်းလေးအတိုင်းပွတ်ပေးလိုက်၊ အထဲကို နှိုက်လိုက်နဲ့ တလှည့်စီလုပ်ပေးနေတော့ မမလည်း သူ့လက်တွေနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ နှိုက်ထားတဲ့လက်ကိုကိုင်ပြီး ကိုယ်တိုင် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလုပ်ပေးလာပြီး ခဏ နေတော့ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူထန်လာတာကို ရိပ်မိတော့ လက်ညှိုး တချောင်းထဲနဲ့လုပ်ပေးနေရာက လက်ခလယ်ကိုပါထည့်လိုက်ပြီး နှစ်ချောင်းပူးပြီးထည့်ပေးလိုက်တော့ သူလည်း တဖြည်းဖြည်း ကော့ပေးလာတယ်။ နည်းနည်းလည်းကြာလာရော ““မောင် မောင်လေး၊ ခဏရပ်လိုက်ပါဦး”” လို့ပြောတာနဲ့ ရပ်လိုက်တော့ မမက … ““ မောင်လေးဟာကို မမဟာထဲသွင်းလိုက်ပါလားကွာ …ဟင် ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ မမရဲ့ ….. လာလာ မမရှေ့မှာ ဒူးထောက်လိုက် ”” အဲဒီလိုနဲ့ မမကိုယ်တိုင် ကျွန်တော့်ဟာကိုကိုင်ပြီး တပ်ပေးလိုက်တော့။
ကျွန်တော်လည်း ဆောင့်ချလိုက်တော့ အရည်တွေနဲ့မို့ လျှောလျှောလျှူလျှူပဲဝင်သွားပါတယ်။ မမက ပေါင်တွေကိုမြှောက်လိုက်ပြီး သူ့ခြေထောက်တွေနဲ့ ကျွန်တော့် ခါးကိုလှမ်းချိတ်လိုက်ပါတယ်။ ““ဆောင့်ဆောင့် မောင်လေး ကောင်းတယ်”” လို့ပြောလိုက်ပြီး သူ့ခြေထောက်တွေနဲ့ ကျွန်တော့် ခါးကို ဆွဲဆွဲယူတယ်။ အချက်ငါးဆယ်လောက်လဲ ဆောင့်မိရော အထဲကညှစ်နေတဲ့ အရသာကို မခံစားနိုင်တော့ပဲ ကျွန်တော် တဆတ်ဆတ်တုန်လာတော့တယ်။ မမကိုကြည့်လိုက်တော့လည်း ကော့ကော်ကန်ကားဖြစ်နေပြီ။ ကျွန်တော်လည်း ထိန်းလို့ မရတော့ပဲ ““မမ မောင်လေးပြီးပြီ အား …”” လို့ပြောလိုက်ရင်း အရည်တွေကို မမအဖုတ်ထဲပန်းထုတ်လိုက်တော့ မမလဲ တချက် ဆတ်ကနဲတုန်သွားပြီး သူ့အရည်တွေက အဖုတ်ထဲကထွက်ကျလာပါတော့တယ်။ အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း မမကို ဖက်ပြီး လှဲချလိုက်ပါတော့တယ်။ နောက် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ နောက်နေ့မနက်အထိပါပဲ။ နိုးလာတော့ ဘေးနားမှာ မမ မရှိတော့ဘူး၊ ကျူရှင်သွားပြီလို့ပြောတာပဲ။ ကျွန်တော်လည်း အန်တီ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်…..ပြီးပါပြီ။